အိုဒရှိရောခို ၏ ရှုခင်းနေရာ ZEKKEI Japan
ဒေသများ ဆာပိုလို . အိုတာရု ဟကိုတဒဲ ဖူရာနို ဘီအဲအိ ဘွန်းကရော ဟိုကိုင်းဒိုး ဆန်းဒိုင်း မဆုရှိမား ဆန်းဒိုင်း မဆုရှိမား ဖူကူရှီမား အအိုမိုရိ အာခိတ အိဝတဲ ယာမဂတ တိုကျို ကာမာကူရ ဟခိုးနဲ ယော်ကိုဟားမ နီကိုး၊ကီနုဂါဝ တိုချိဂိ ဂွန်းမ ချိဘ အီဘရဂိ စိုင်းတမ ကာမာကူရ ဖူဂျီရာမ ဟီဒတာကရာမ ခနဇဝ ယာမာနာရှီ ယာမာနာရှီ နဂနော့ ခရုအိဇဝ နီအိဂတ တိုးယာမ၊ကူရိုဘဲ၊တာတဲရာမ အိရှိဂါဝ ဖုခုအိ ဂိဖု အာအိချိ ကျိုတို အိုဆာကာ နရ ဟရောဂေါ့ ကိုးဘဲ ရှိဂ ဘီဝခို ဝဂယမ မိအဲ . အိဆဲရှိမ ဟီရိုရှီးမား မီယဂျီးမား အိုခယာမ ရှိမနဲ တို့ တိုရိ ယာမဂူချိ ခဂါဝ တိုခုရှိမ ခိုးချိ အဲဟိမဲ ဖုကုအိုခ . ဟာခတ အိုအိတ ဘဲ့ပု ခုမမိုတို မိယဇခိ ခါဂိုရှိမ ဆဂ နာဂဆာကီ အိုခီနာဝါ
အိုဒရှိရောဟရသည် မိုးကြာမြင့်စွာရွာသွန်းမှု၊ မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုများကို ခံယူကာ ခဏတာပေါ်ပေါက်လာသောရေကန်ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် ပေါ်ပေါက်လာပါသည်။ နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းတွင် တစ်ကြိမ်တစ်ကြိမ်သာမြင်တွေ့ နိုင်သည့်အတွက် (မဘိုရောရှိကန်) ဟုခေါ်ကြပါသည်။ နွေဦးမှ နွေရာသီအထိ အဇမိ၊ ဟိအိုးဂိအယမဲစသော ကုန်းမြင့်အပင်များလည်း ပေါက်ကြပါသည်။
〒 321 - 1661 Tochigi ken Nikkō-shi Chūgūshi
JR ( Nikkō ) ဘူတာမှ တိုဘုဘတ်စ် ( Yumoto ရေပူစမ်းသို့ သွားသော ) ပျမ်းမျှ ၁ နာရီ ၅ မိနစ်၊ ( Akanuma ) တွင်ဆင်းပြီး လမ်းလျှောက်ပါက ပျမ်းမျှ ၃၀ မိနစ်
Kiyotaki Icမှ ပြည်တွင်းလမ်း ၁၂၀ ကိုပျမ်းမျှ ၂၂ကီလိုမီတာ၊ Akanuma မှလမ်းလျှောက်ပါက ပျမ်းမျှ ၃၀ မိနစ်
ဆမ်းဂျောဂလွင်ပြင်လေးဖက်မှာ တည်ရှိပြီး အဲဒီ လေးပိ...
အိုခုနီကိုး နာမည်ကြီးရေတံခွန် သုံးခုမှာ တစ်ခုဖြစ...
နန်တိုင်တောင်မီးတောင်ပါက်ကွဲမှုကြောင့် တာဖို့ ပြ...
ရေတံခွန် ၄၈ခု ပျံ့နှံ့ ရှိတဲ့ နီကိုးဖြစ်ပြီး အဲဒ...
၁၆၁၇ခုနှစ် တိုခုဂဝ အစပိုင်းကာလ ဗိုလ်ချုပ် တိုခုဂ...
အမြင့် ၇ မီတာ၊ အကျယ် ၃၀ မီတာရှိတဲ့ ကြီးမားတဲ့ ရေ...
ဆောင်းဦး၏လည်ပတ်ခြင်း၊ စက်တင်ဘာတွင် ဂျပန်တွင်လည်ပတ်ချင်စရာအကောင်းဆုံးရှု့ ခင်းအဆင့်
ဂျပန်၏ဆောင်းရာသီဟုဆိုပါက ဆောင်းကုန်ခါနီးသစ်ပင်များက အနီရောင်ဖြစ်နေကြသော (မိုမိဂျိ)သည် ထင်ရှားသော်လည်း မိုမိဂျိသည် အောက်တိုဘာလနှင့် နိုဝင်ဘာလသည် အဓိက။ ဆောင်းဦးအစတွင် စက်တင်ဘာလတွင် တဖန်မတူညီသော ဆ...
( သြဂုတ်လကို အကြံပြုချင်ပါတယ် ) နွေရာသီကို ခံစားပျော်ရွှင်နိုင်မယ့် ရှုခင်းနေရာ ၁၀ ခု လက်ရွေးစင်
ပြင်းထန်တဲ့ အပူချိန်က ကြာရှည်နေပြီး အားလုံးဘဲ နွေရာသီ နွမ်းနယ်မှုဖြစ်နေပါသလား ? နွေလယ်ခေါင်ဖြစ်တဲ့ သြဂုတ်လက ဒေသတိုင်းမှာ နွေရာသီပွဲတော်နဲ့ မီးပန်းပွဲတော်တွေ ကျင်းပပြီး ကောင်းကင်ပြာအောက်မှာ သဘာဝကို...
ချိုမြိန်တဲ့ရနံ့ တွေ မှာ ပွေ့ ပိုက်နိုင်တယ်။ မီအဲ ရဲ့ အကြီးဆုံး ၃ ခုဖြစ်တဲ့ ( တရုတ်ဆီးပင် ) ရှုခင်းကို သွားကြည့်ရအောင်
နှစ်စဉ် ၊နွေဦးမှာ ပန်းကြည့်မယ်လို့ ပြောရင် ဆာကူရာဆိုတဲ့ လူတွေက များမယ်လို့ ထင်ပေမယ့် ခြေတစ်လှမ်းဦးတဲ့ တရုတ်ဆီးပင်ကို ပန်းကြည့်မယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုလဲ ။ အနီရောင်နဲ့ အဖြူရောင်၊ ပန်းရောင်တွေရှိတဲ့ ဝိုင...
အအေးများရှိနေသောရာသီဥတုတွင် ရေပူစမ်းဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်ကို နွေးထွေးအောင်လုပ်ကြစို့ !ရှုခင်းလှပသော ဂျပန်နိုင်ငံ၏ အကောင်းဆုံးရေပူစမ်း ၅ ခု
အောက်တိုဘာလည်းကုန်ခါနီးပြီ၊ တဖြည်းဖြည်း အေးလာတော့မယ် ဆောင်းရာသီနီးကပ်လာသော နိုဝင်ဘာလအချိန်သည် ဂျပန်တွင် (ရေပူစမ်း) ကို ချစ်ခင်မြတ်နိုးကြသောအချိန်ဖြစ်ပါသည်။ အေးမြသောဆောင်းရာသီတွင် ဝင်ရသောရေပူစ...
ဒီဆောင်းဦး သွားချင်တယ် ! ကျိုတိုရဲ့ မိုမိဂျိနေရာ ၁၀ ခု လက်ရွေးစင်
ဆောင်းဦးရာသီ ကျိုတိုက သမိုင်းဝင်ဘုရားကျောင်းနဲ့ ခမ်းနားလှပတဲ့ ပန်းခြံတွေကို မိုမိဂျိတွေဖြင့် ချယ်မှုန်းထားပြီး တကယ့်ကို ရှုခင်းရတနာသိုက်ကြီးလို့ ပြောနိင်ပါတယ်။ဒီတစ်ကြိမ်က တည်းဖြတ်အဖွဲ့ က ရွေးချယ်ထာ...
၇၉၄ ခုနှစ် ဟဲအိအန်းကရောဆန်းဆိုမှ ၁၈၆၉ခုနှစ် တိုကျိုဆန်းတိုအထိ ဂျပန်...
ဗိဝရေကန်သည် ဂျပန်နိုင်ငံ၏အကြီးမားဆုံးသော ရေကန်များထဲတွင် ရေသန့် စင်...
ဟခတသည် ကျုးချုးဒေသ၏ တရုတ်တန်း။ ဈေးဝယ်ခြင်း၊ လည်ပတ်ရာနေရာများ အားလံ...
ခုမမိုတိုခရိုင်သည် ခရီးသွားလည်ပတ်နိုင်သောနေရာအဖြစ် လူကြိုက်များပါသည...
ဂျပန်နိုင်ငံ၏မြို့ တော်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံရေး စီးပွားရေးအဓိကနေရာ။ ဈေး...
နာရီဒအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်တည်ရှိသော ချိဘခရိုင်သည် ဂျပန်နိုင်ငံ၏ကော...
ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ် ယူနက်စကိုစာရင်းဝင်အဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ခံရသော ဟခုရှင်းဆန်...
တိုချိဂိခရိုင်သည် မြို့ လယ်မှ နီးသော ကုန်းမြင့်ဒေသ။ အရှိခဂမြို့ တွင...
သစ်သားများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောတည်းခိုခန်းများက တန်းစီရှိနေသော စကားလုံ...
ဂျပန်နိုင်ငံ၏ကျွန်းတန်းများ၏ မြောက်ဘက်အကျဆုံးတွင်တည်ရှိနေသော ပြည်တွ...
ဂျပန်နိုင်ငံ၏ သေးငယ်သောခရိုင်။ တကမစွတ်မြို့ ထဲတွင် တကမစွတ်ရဲတိုက်၊ ...
ခုဆစွတ်ရေပူစမ်း၊ စူအိဂျောရေပူစမ်း၊ အိကဟိုရေပူစမ်း စသည်များရှိနေသော ...
ဖုရာနော့သည် လာဗန်ဒါထင်ရှားပါသည်။ ချူးဖုရာနော့မြို့ တွင်ရှိသော (လယ်က...
ယိုကိုဟားမမြို့နာနော့ဟနဘတခဲ